Fushimi Inari, एक हजार ढोका को मन्दिर | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | क्योटो, के हेर्ने
जापान यसमा अद्भुत गन्तव्यहरू छन् र मेरो सल्लाह यो धेरै पटक भ्रमण गर्नु हो किनभने केवल एक मात्र पर्याप्त छैन। म मेरो चौथो पटक जाँदैछु र हेर्नु र गर्नुपर्ने अझै धेरै कुरा छ! क्योटो यो एक सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य हो र यो तपाईं फेला पार्नुहुनेछ जहाँ यो छ Fushimi inariसाइटमा तपाईले छविमा देख्नु भएको जुन यो पोष्टको मुकुट हो।
उनका फोटोहरू इन्टरनेटमा धेरै लोकप्रिय छन् त्यसैले यो गन्तव्य हो कि तपाईं क्योटोको तपाईंको यात्रामा मिस गर्न सक्नुहुन्न। मैले यसलाई हाईलाईट गर्‍यो किनकि यस शहरका अन्य धेरै आकर्षणहरू छन् र कहिलेकाँही यो विशेष गरी बेवास्ता गरिन्छ वा स्थगित हुन्छ। र तपाइँ वास्तवमै छैन।
2 Fushimi inari
क्योटो धेरै शताब्दीहरु को लागी जापान को राजधानी भएको छ, आठौं देखि १ th औं शताब्दी को सही हुन को लागी, र यो एक विशाल र जनसंख्या भएको ठाउँ हो जहाँ पुरानो र आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक सहवास। यो उही नामको प्रान्तको राजधानी हो, कन्साई क्षेत्रमा र en Shinkansen वा बुलेट ट्रेन तपाई टोकियोबाट दुई घण्टा सम्ममा पुग्नुहुन्छ.
जापानी शिन्टोइजका सबै देवताहरूलाई धन्यवाद, दोस्रो विश्वयुद्धको बमहरू त्यसमा खसेनन्, त्यसैले यसको वास्तुगत खजाना आजसम्म जीवित छ र हामी देख्न सक्छौं मन्दिरहरू, pagodas र शताब्दी पुरानो भवनहरू।
केवल केही आकर्षणहरूको नाममा म भन्न चाहन्छु कि तपाईंले क्योटोलाई इम्पीरियल प्यालेस, कियोमिजुडेरा, हिगाशीयामा ऐतिहासिक जिल्ला, पोन्टोच वा निशिकी बजार भ्रमण नगरी छोड्न सक्नुहुन्न। साँझ पर्दा स्टेसनको अगाडि टावरमा चढ्नु पनि एकदम राम्रो देखिन्छ।
तर आज हामी ध्यान दिनेछौं Fushimi inari, एक गन्तव्य जुन शहरको बाहिरी छेउमा छ। केहि छैन, हो।
El धानको शिन्टो ईन्नारी हो र यो मन्दिर उहाँलाई समर्पित छ। त्यहाँ पुग्न तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ JR ट्रेन लिनुहोस् र Inari स्टेशनमा तल झर्नुहोस्, नारा लाइनमा क्योटोबाट दोस्रो स्टेशन। त्यो हो, यो केवल १ y० येन, एक डलर र आधा को लागत मा पाँच मिनेट को यात्रा। अवश्य पनि, भ्रमित नहुनुहोस् र द्रुत ट्रेन लिनुहोस् किनभने यो बन्द हुँदैन। यो स्थानीय हुनु पर्छ। पछि, अभयारण्य स्टेशन बाट एक छोटो पैदल दूरी पर छ.
अभयारण्य अवस्थित छ क्योटोको दक्षिण र यो ती सबैमा चामलका देवतालाई समर्पण गरिएको मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो धर्मको लागि स्यालहरू ईश्वरीय सन्देशवाहकहरू हुन् यसकारण तपाईले उनी जहाँसुकै देख्नु हुन्छ। उनीहरूले कहिलेकाहिँ उनीहरूको मुखमा राखिएको साँचो चामल भण्डार गरिएको भण्डारहरूको उद्घाटन हो।
यो भनिन्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुको साथै देशभरि करिब 40० हजार अभयारण्यहरू मध्ये, यो सबै भन्दा पुरानो हो किनकि यसको अस्तित्व क्योटोको राजधानीमा 794 XNUMX .XNUMX मा रूपान्तरणको साथ मिल्छ।
अभयारण्यको प्रवेशद्वारमा त्यहाँ एउटा विशिष्ट ढोका वा पोर्टिको छ जसको अगाडि तल हत्केर हत्केलाहरू आवश्यक पर्छ। बोलाइयो रोमन र जापानका तीन यूनिफाइरहरु मध्ये एक द्वारा दान गरिएको थियो, टियोटोमी हिडेयोशी, १ 1589 XNUMX। मा। मुख्य हल वा पछाडि खडा छ कुकुरहरु जहाँ साधारण भोजको प्रस्तुतिको साथ चावलको देवतालाई आदर गरिन्छ। यो केवल यो कोठा पछाडि छ लोकप्रिय रातो पोर्च सडकहरू, टोरिस
यो वास्तवमा ट्रेल्सको नेटवर्क हो जुन बाक्लो ग्रोभबाट सुरू हुन्छ र सजाइएको छ हजारौं टोरिस, हजारौं। यसैले पवित्रस्थानको नाम। ती सबै व्यक्ति र कम्पनीहरूले समयसँगै दान दिएका छन्, त्यसैले यदि तपाईं नजिक जानुहुन्छ भने तपाईंले यो जानकारी, नाम र मिति देख्नुहुनेछ, प्रत्येक मध्ये पछाडिबाट।
यो अनुदान अनुमान गरिएको छ कि दान संग 400 येन को साथ यदि छ भने बजार यो सानो छ र यसको मान पोर्टिकोको आकार अनुसार बढ्छ।
फोटोहरू स्पष्ट रूपमा उत्कृष्ट छन्, तर यात्रा समाप्त गर्नु कुनै सानो उपलब्धि होइन। र मेरो सल्लाह भनेको यो हो कि तपाईंले यो गर्नु भयो भने पनि। जे भएपनि तिनीहरू दुई वा तीन घण्टा भन्दा बढी छैन र जहाँ तपाईं सँधै फर्केर जान सक्नुहुनेछ जब तपाईं माथि जानुहुन्छ त्यहाँ कम व्यक्तिहरू छन्, अधिक मौनता र अधिक एकाकीपन।
जे होस् तपाईं खाना ल्याउनुहुन्न, तपाईं लाभ लिन सक्नुहुनेछ र पसलहरूमध्ये एउटामा आराम गर्न सक्नुहुनेछ कि जस्तो कि विशिष्ट व्यंजनहरू प्रदान गर्दछ। inari udon र ती चीजहरू। यो लायक छ।
तपाईंले सम्पूर्ण मार्गमा टोरिसको समान मात्रा देख्नुहुने छैन, थोरै र थोरै देखा पर्नेछन्, तर walking 45 मिनेट जति हिंड्न थाल्नु भएपछि तपाईं Yotsutuji भनिने छेउमा पुग्नुहुन्छ। यो आधा बाटोको माथि छ, अधिक वा कम, र यस बिन्दुबाट त्यहाँ छन् शहर को धेरै राम्रो विचार उसको वरिपरि पर्वतहरू थिए। यहाँबाट सडक शीर्षमा गोलाकार हुन थाल्छ र यो सब भन्दा रमाइलो अंश होईन ... अन्त्यमा पुग्न रोक्नुहोस्!
व्यावहारिक जानकारी Fushimi Inari भ्रमण गर्न
घण्टा: यो सँधै खुला हुन्छ तर ढिलो नगर्नुहोस् ताकि यो रातमा नहोस्। मन्दिरको प्रार्थनाको समय बिहान 7, 8::30० र साँझ 6::30० र साँझ :4: .० छ।
मूल्य: प्रवेश निःशुल्क छ।
कहिलेकाँही पर्यटकहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दछन् किनकि वास्तविकतामा क्योटोले धेरै काम गर्नुपर्‍यो र यस भ्रमणले हामीलाई स्टेशनमा फर्कन र रेल लिन बाध्य पार्छ, तर ए, हामी यो गर्छौं जब हामी छिमेकी शहर, सुन्दर नारा, भ्रमण गर्न चाहन्छौं। यो मेरो सल्लाह हो: क्योटोमा राम्रो प्रवास व्यवस्थित गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई यसको आकर्षणहरू एक वा दुई दिनमा जान्न मद्दत पुर्‍याउँछ र त्यसपछि अन्य getaways योजना गर्न वा दिन यात्रा: एक नारामा, एक अरिशामालाई र फुशमी इनारीलाई। यो एकै दिनमा सबै गर्न असम्भव छ त्यसैले आफैलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » क्योटो » Fushimi Inari, एक हजार ढोका को मन्दिर
के मेरो इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू अन्य देशहरूमा काम गर्दछ?